काँग्रेसको प्रदेश सभाको समानुपातिक सांसदमा को को भए ? सुचीसहित - Muldhar Post
काँग्रेसको प्रदेश सभाको समानुपातिक सांसदमा को को भए ? सुचीसहित
मूलधार सम्वादाता २०७४, १५ पुष शनिबार 705 पटक हेरिएको
काठमाडाैं- नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाउने नाम निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ। निर्वाचन आयोगमा दिउँसो नै पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता भएको थियो। नाम भने राती मात्र पार्टीले बुझाउन सकेको हो।